Rina manyanga hariputirwe: BEMBERA PADARE | Kwayedza
Rina manyanga hariputirwe: BEMBERA PADARE
31 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-30T20:23:16+00:00 2020-01-31T00:00:10+00:00 0 Views
TICHIBVA muhurukuro yatakaita svondo rakapera “mbudzi kudya mufenje hufana nyina” apo taikurudzirana kusaita nhafu mudzimba dzedu, mumakambani atinoshandira, kana mukushandira nyika, takaparura nyaya inoti “rina manyanga hariputirwe”. Ichokwadi kuti nyanga dzinonetsa kuputira kana kuviga nokuti dzakapinza, dzinoboora zviputiriso, dzobva dzaonekwa.
Ndizvo zvimwe chetewo nenhafu dzataikurukura svondo rakapera nezvimwe zvakaipa zvinoda kuvigiridzwa nevanhu mukurarama kwavo.
Mibvunzo ndiyoyi, ko vanhu vanodirei kuviga zvinhu? Vanotyei kuti apa ndatadza, mangwana handichapamhidza? Mhinduro ndidzodzi zvakare, kana ari mwana, anoti ndinotukwa kana kurohwa nevabereki kuti ndapunza ndiro, ndarovha kuchikoro kwandabva kumba ndichiti ndiri kuenda, asi ndikasazoenda.
Asi zvingatadzike here kuzoonekwa mangwana kuti ndiro yedhaka yakapunzwa, kana kuti mwana akarovha kuchikoro, kana kuti mwanasikana akatamba zvisizvo nemukomana iye achiri pachikoro?
Mhinduro ndidzodzi dzinoti zvose zvichabuda pachena nokuti amai vachada kupakurira ndiro dzavo dzakanaka kana vanyarikani vashanya pamusha, mudzidzisi vachavhunza vabereki kuti sei mwana asina kuuya kuchikoro nezuro, mwanasikana achatadza kumedza dumbu kana pamuviri pakura.
Ndizvowo nesu pamusha, pakambani kana mumapazi ehurumende. Mhosho dzanhasi dzinobuda mangwana. Nokudaro ngatibudei pachena kukundikana kwedu, totsvaga rubatsiro nguva iripo, tokumbira ruregerero nguva ichiripo zvakare, nokuti muripo unopihwa munhu anoramba mhosva yake unokura pakuti anopedzera vanhu nguva iye achiziva kutadza kwake.
Dambudziko rinouya tikavanziridza zvakaipa, nokuti dambudziko richany’enga rikakura, rozotadza kugadzirika. Tikanonoka kugadzirisa dambudziko, richazodhura kugadzirisa kana kusazogadzirika zvachose. Izvi zvicharwadza vanyakunyeperwa vaye, zvovashatirisa, mwana kwave kutorerwa shamhu obva arohwa, kuti sei usina kutaura kuti ndiro yakapunzika, kana kurohwa kuti sei wakatiza chikoro nezuro, kana kudzingwa pamusha kunzi enda unogara neakakupa pamuviri.
Ngatizviongororeyi kuti zvandakaita ndikavanza mumhuri yangu, mukambani mangu, kana munyika, zvakasvitsa kupi musha, kambani kana nyika. Nyaya yese iri kunongedzera kune vanotungamira misha.